Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Halganka & Hiilka Dhalinyarada OYSU, By. Mujaahid Sh Ibrahim.
Maqaal: Halganka & Hiilka Dhalinyarada OYSU, By. Mujaahid Sh Ibrahim.
Posted by Wariye Qaran	/ November 14, 2017
Laga soo bilaaabo kacdoonkii dhalinyarada ee laga unkay magaalada London ee caasimada dalka Ingiriiska sanadkii 2005-tii ee la magac baxay Ogaden Students Forum, illaa kacdoonkii dalalka mareykanka iyo Australia, kadibna wada tashi iyo afkaar iswaydaarsi dheer isu badalay Ururka Dhalinyarada & Ardayda Soomaalida Ogadenya ee (OYSU).
Ururwaynaha OYSU ayaa lagu mideeyay in ka badan 50 urur hoosaad oo aduunka ka kala jirray xiligaasi oo kala fikir, kala aragti, kala qorshe, kala astaan, iyo kala hogaamin ahaa ayaa ku midoobay dallad kaliya. Waa Alle mahadii Mar Hadii safaro dheer dheer ka dib lagu guulaystay in dhamaan ururadaasi dallad kaliyah lagu mideeyo ka dibna loo sameeyo xeer guud iyo astaan guud, hogamin guud, qorshe guud oo loo midaysan yahay oo mudo dheer laga soo shaqeeyay. Hadaba, maalintii la mideeyay daladda guud ee ururka OYSU ayaa noqotay maalin taariikhi ah oo mudan inaan la iloobi karin.
Barnaamijyada ugu waa weyn ee midnimada ururka ururwaynaha OYSU lagu gaadhay, waxaa ka mid ahaa. Is barasho guud oo dhax marta dhalinyarada ku nool kismaayo iyo kuwa ku nool Canada. Dhalinyarada ku nool garissa ilaa Australia. Kuwa ku kala nool mareykanka ilaa Eritrea. Dhalinyarada ku nool Europe ilaa new Zealand. Dhalinyarada ku nool South Africa illaa dalalka Carabta ee fog fog.
Madoonayo inaan ka weecddo ujeedka ugu weyn iin maqaalkan qalinka ugu qaatay, balse waxaan dul istaagi meeshaan u socday ee u jeedadaydu ay tahay. In ka badan 20 qoys oo kamid ah OYSU ayaa lagu hormariyay, laguna aas aasay, waxaa ugu danbeeyay sagootintii iyo galbintii iyo farxadii dhex martay xoghaya guud ee ururka OYSU, Mr shaafi shilabo iyo marwo Huda Axmed.
Sidookale shalay waxaynu farxad iyo duco ku sagootinay Xoghaya Arrimaha Dibada iyo xidhiidhka caalamiga ah ee ururka OYSU, Marwo Jaweeriya iyo Mudane Ismaaciil Mohamed oo ka tirsan ururka dhalinyarada Sydney Australia
kana mid ahaa dhalinyarada safka hore kaga jira ama utaagan faafinta dulmiga ka socda gudaha dalka Ogadenia.
Hadaba, waxaan leehay Guusha ururka OYSU waxaa ka mid ah soo saarida iyo kobcinta jiilashii dalka iyo Dadka hogaamin lahaa mustaqbalka dambe haduu ilaahay yiraahdo iyagoo safarka halganka isku sii dhex bartay, isku kalsoonaaday.
W/Q: Mujaahid Sheekh Ibrahim